Xasan Sheekh oo ku dhawaaqay digniin la xiriirta Ciidamada - Awdinle Online
Xasan Sheekh oo ku dhawaaqay digniin la xiriirta Ciidamada
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dhowr jeer uu ka digay in Ciidamada loo adeegsado Arrimo Siyaaadees, isla markaana weli uu ka digayo.
Xasan Sheekh oo Shir jaraa’id qabtay waxaa uu sheegay in dhibaatooyin farabadan laga dhaxlay in siyaasad loo adeegsado, halka qaarkood ay iska diideen, waxaana uu markale ku celiyay in Arrimo siyaasadeed loo adeegsado Ciidamada.
” Aniga dhowr jeer waan ka digay in la siyaasadeeyo Ciidamada, waana aragteen wixii dhacay, waxaana ku mahadsan Ciidamadii diiday in loo adeegsado wax aan Dastuurka ogoleyn, waxaana ugu baaqayaa Ciidamada inay iska diidaan waxkasta oo ka hor imaanaya Dastuurka ayuu yiri” Xasan Sheekh.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa uu sheegay in ay muhiim tahay in laga wada hadlo waxyaabaha la isku haayo ee dhanka doorashada, sidoo kale la isku tanaasulo si loo helo wax heshiis lagi yahay.
Hadalka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kusoo aadaya xilli Magaalada Muqdisho ay ku dagaalameen Ciidamo ka wada tirsan doadda oo kuwa taageersanaa muddo kordhinta iyo kuwo kasoo horjeeday.
Previous articleMareykanka & Midowga Yurub oo qoraal xasaasi ah kasoo saaray doorashada Soomaaliya
Next articleQarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay Magaalada Muqdisho